Izindaba - Yini okufanele uyinake lapho ufaka i-cylinder head gasket
Sisiza umhlaba okhulayo kusukela ngo-1991
Shayela Ukusekelwa 0086-15763807215 0086-535 6856565
Ukusekelwa kwe-imeyili xsb@ytsc.cn 805870329@qq.com
Rubber Camera Metal Material
Uchungechunge lokulwa nomsindo
Abutment Isiqeshana Series
Izinto ze-Asbestos Gasket
Uchungechunge lwe-QF Hi-Q
Uchungechunge lwe-FBYS olubiza imali
I-R & D.
Yini okufanele unake lapho ufaka i-cylinder head gasket
Injoloba yokwenziwa ingashintsha ukuma kwayo njengoketshezi. Vele, ayikwazi ukugeleza. Lapho amandla okucindezela acindezela ukusonteka kwawo anyamalala, angabuyela esimeni sawo sokuqala (okungukuthi, ivolumu ye-gasket ayishintshi ngesikhathi senqubo yokuminyanisa. Shintsha, okuvezwa ubukhulu bokushintsha kwengcindezi).
kufanele ibe namandla anele okumelana namandla okucindezela ayenza ingene esimweni esivaliwe futhi imelane nensimbi yomfutho ophakeme (okungukuthi, izakhiwo ezibonakalayo ze-gasket yenjoloba njengamandla we-tensile namandla we-tensile).
Ngokulungisa ifomula, ayikwazi ukufinyelela kuphela amandla anele okusetshenziswa, kepha futhi inepulasitiki eyanele, ukuze ikwazi ukunamathiswa eduze kwensimbi ngaphansi kwengcindezi efanele, ngaleyo ndlela ikhiqize umsebenzi wokufaka uphawu (ukuma kwe-gasket kanye nepuleti yokuvala uphawu ama-grooves ayahambisana).
4. ukumelana nokungena
Isakhiwo senethiwekhi enamacala amathathu epulangwe senjoloba yokwenziwa singamelana nokungena kweziphuzo ezinezakhi ezahlukahlukene zamakhemikhali (ukumelana nabezindaba).
5. ukumelana nokushisa
Irabha ezintweni ze-polymer inokubi, okungukuthi, kuzodala ukuthi zonke izinto zokwenziwa zenjoloba zilungele kuphela ibanga lokushisa elincane ngokuya ngokumelana nokushisa. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha ngokucophelela ifomula lezinto ngokuya ngezinga lokushisa elidingekayo ukuze lisetshenziswe. .
6. Impilo yesevisi
Izinto eziningi zokwenziwa ezintsha zinezici zempilo ende yokusebenza uma kuqhathaniswa nezinto zohlobo oludala. Lokhu kungenxa yokusetshenziswa kwezithasiselo ezintsha ukwandisa impilo yensizakalo. Kulokhu, ukukhetha okuyikho kokwakhiwa kwezinto zokwenziwa kubaluleke kakhulu. Zonke izinto zokwenziwa ezisuselwa enjoloba zizothola ukuphumula kwengcindezi. Ngesikhathi sokusetshenziswa, ngenxa yezinguquko zamakhemikhali ngaphakathi kwento yokwenziwa, umsebenzi wokuqala wokufaka uphawu uzokwehla kancane kancane, futhi lapho ukusebenza kokubekwa uphawu kuphansi Okungenani, ukuvuza akunakugwenywa.
I-Yantai Ishikawa Sealing Technology Co, Ltd. igxile ekukhiqizeni nasekusebenzeni kwamapuleti wokufaka uphawu ahlukahlukene, isilinda gaskets, gaskets, kanye nezihlangu zokushisa. Kuyiphini likasihlalo weChina Friction and Sealing Materials Association kanye nosihlalo we-Multi-cylinder Small Diesel Engine Council we-Internal Combustion Engine Association. Ingenye yezinkampani ezinkulu kakhulu zasekhaya ezisebenza ngokukhiqiza imikhiqizo yokuvala uphawu.
Isikhathi Iposi: Jan-14-2021
Le nkampani idonsa ifilosofi yamazwe omhlaba esezingeni eliphakeme namasu wokucubungula futhi yenze izinto ezintsha.
Kuzokwenzekani uma igesi lesilinda lekhanda ...
NgoJuni 16, 2017
Yini okufanele unake lapho ufaka ...
Okufanele ukwenze uma kunenkinga nge ...
Kunezinto eziningana ezidinga ukunakwa ...
Ukusebenza ngemuva isilinda ikhanda gasket fa ...